Max Energy | Corporate Credit Sales
Home > Corporate Credit Sales
We provide corporate credit sales service to corporate and organization for the convenience of their purchasing process. Providing corporate credit sales service also build good relationship between Max Energy and its corporate customers. All our staff always maintain and sustain corporate customers’ satisfaction and loyalty.
Max Energy သည် အဖွဲ့အစည်း၊ Company များအတွက် အကြွေးရောင်းစနစ်ဖြင့်လဲ ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ Max Energy သည် အဖွဲ့အစည်း၊ Company များအတွက် အကြွေးရောင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေအဖွဲ့အစည်းများကြား ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံမှုတစ်ခုကိုလဲ တည်ဆောက်လျက်ရှိပါသည်။ Max Energy မှ ဝန်ထမ်းများသည် Customer များစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အတွက်လဲ ကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
(+95 9) 891754982